Egwu anaghị akwụsị na New Orleans, ọbụlagodi n'oge ajọ ifufe Ida nwere nnukwu mmetụta
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Egwu anaghị akwụsị na New Orleans, ọbụlagodi n'oge ajọ ifufe Ida nwere nnukwu mmetụta
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Onye isi ala US Biden na FEMA
Udi nke 4 Hurricane Ida nke ifufe 120-150 mph na 'oke' oke ifufe na-adọka elu ụlọ, na-eme ka Osimiri Mississippi na-asọ azụ na ụlọ elu dị elu na-ama jijiji. Oké ifufe ahụ mere ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nde mmadụ ghara inwe ike.
Ifufe Hurricane Ida ahapụla New Orleans na -enweghị ike n'ihi "mmebi mbibi na -akpata mbibi," dị ka Entergy New Orleans si kwuo.
Steeti Mississippi nke US na -akọ na ọkụ eletrik dị na steeti ahụ niile
Ndị ahịa eletrik nwere ike ha agaghị enwe ọkụ n'izu ndị na -abịa.
Ekpere maka New Orleans. Ọ dị ka Katrina ọzọ bụ ozi niile achọtara na Twitter.
Louisiane chọrọ ekpere. N'inwe ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 kacha ala, steeti US a nwere ndekọ ndị mmadụ n'ụlọ ọgwụ na ndị na-eku ume ọkụ. Oké ifufe Hurricane Ida abụworị nnukwu ebili mmiri na nnukwu mbibi ma e jiri ya tụnyere Hurricane Katrina nke gburu mmadụ 1833 na 2005.
Otu iwe iwe kwuru, sị:
Ndị na-emegide vaxxers+ndị na-eme mkpuchi ihu na-egbu onwe ha & ndị ọzọ @[email protected] onye butere ọrụ na mbụ gbuo ppl. Enweela ụlọ ọgwụ zuru oke (covid) n'oge Ajọ Ifufee Ida bụ ihe akaebe nke ihe na -eme mgbe ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị dara na omume (votu NO ihe niile)
Ụlọ ọgwụ dị na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ na-ebelata ikuku oxygen, ebe mpaghara kachasị njọ (dịka Louisiana) hapụrụ naanị awa 12 ruo 24. Ọ bụrụ na Hurricane Ida akpaghasịla usoro ọkọnọ ma ọlị, nsonaazụ ya nwere ike bụrụ ọdachi.
NDỤMỌDỤ: Ndị mmadụ na Louisiana na steeti ndị ọzọ nwere ike na -efunahụ ike n'ihi Ajọ ifufe Ida, jupụta na mmiri ịsa ahụ gị. Jiri mmiri a mejupụta tankị mposi gị ka ị nwee ike iji ụlọ mposi gị. Obodo enweghị ikike pụtara na nfuli mmiri agaghị arụ ọrụ ya mere enweghị mmiri.
- Parish Orleans niile - nke bụ obodo New Orleans - enweghị ike, dị ka NOLA Ready si kwuo, mkpọsa nkwadebe mberede New Orleans.
Ọ nwere ike bụrụ ọpụpụ n'ihi nnukwu nsogbu mgbasa.
A tweet na -ekwu: M na -aga na -aga n'ihu na anọ New Orleans ọwa. ABC otu nọ na -eme mmemme oge niile n'ime awa ole na ole gara aga. M na -eche ma a kwaturu ha n'ikuku ma ha enweghị ike ịlaghachi azụ.
Udi nke anọ Hurricane Ida kụrụ Louisiana afọ 4 mgbe mbibi nke Hurricane Katrina; Gọvanọ John Bel Edwards kwuru na oke mmiri ozuzo ahụ nwere ike bụrụ Louisiana kachasị njọ kemgbe afọ 16.
Ụlọ ndị dị elu na -ama jijiji, oku 911 anaghịzị aza.
Egwu anaghị akwụsị akwụsị na New Orleans. "Ọbụghị maka" ajọ ifufe na-agbanwe ndụ "Phil Lavelle biputere.
Egwu anaghị akwụsị na New Orleans. Ọbụghịdị maka ajọ ifufe "ndụ na -agbanwe" #HurricaneIda pic.twitter.com/wc3s8STIEq
TWEET: Ọ bụrụ na ị ma maka ọgbakọ ọ bụla nwere ntụkwasị obi na nke edobere anya nke nọ na njikere inyere ndị ihe metụtara aka. Ajọ ifufe Ida biko mee ka m mara ka m nwee ike inye onyinye. Echetara m Katrina. Ana m echeta nleghara anya steeti na ndị mmadụ tara ahụhụ n'ihi ya. Ọ bụghị ọzọ.
Otu akụkọ na -ekwu na ọ dị n'udo na Bourbon Street na New Orleans, ihe niile gbara ọchịchịrị. Mmiri na ifufe na -efesi ike.
Ee ... Amaghịdị m ihe ọkachamara bụ nke a mana ọ na -eyi egwu. #HurricaneIda
Alexander Scott Alexander nọ na New Orleans CBD pic.twitter.com/Yy51B2ECn3
N'elekere 8.00 nke mgbede, Hurricane Ida belatara site na ajọ ifufe nke ụdị 4 gaa n'oké ifufe nke 3 na ọ ga-aga n'ihu na-agbada n'ike n'otu abalị. Mmetụta ka dị oke.
Onye isi ala US Biden tweeted:
Daalụ maka ịrụsi ọrụ ike nke @FEMA, anyị etinyela akụrụngwa, akụrụngwa, na ndị otu nzaghachi ka ha zaghachi Ajọ ifufeIda. Nke ahụ gụnyere ihe karịrị ndị ọrụ FEMA 2,400, ọtụtụ nde nri na lita mmiri, igwe na -enye ọkụ, otu ọchụchọ na nnapụta, yana ihe karịrị ụgbọ ihe mberede 100.